Tag: Wax soo saar | Martech Zone
Aniga oo la wareegaya hay'addeyda oo aan hadda la shaqeynayo lammaanahayga lammaanahayga cusub ee Salesforce, waxaan hayaa arrin aan ku wado laba xisaabood oo loo yaqaan 'G Suite' oo aan hadda haysto 2 kalandarro aan ku maareeyo. Koontadaydii hore ee wakaaladda ayaa wali ku hawlan adeegsiga daabacaaddayda iyo hadalkayga - xisaabta cusubna waxaa loogu talagalay Highbridge. Intii aan la wadaagi karay oo aan arki lahaa jadwal kale oo kan kale ah, waxaan sidoo kale u baahanahay inaan si dhab ah u muujiyo waqtiyada
Khamiis, Juun 28, 2018 Thursday, April 1, 2021 Douglas Karr
Bishan la soo dhaafay, waxaa i weydiiyay laba shirkadood oo kala duwan inaan u isticmaalo xoogaa nidaam maamul mashaariicdayada. Labaduba waa cabsi badan yihiin. Si cad u dhig; waa maareynta mashruuca oo dishey wax soo saarkeygii. Nidaamyada maaraynta mashruuca waa inay ahaadaan kuwo si fudud loo isticmaali karo haddii aad rabto kooxahaagu inay wax soo saar yeeshaan. Waan ku qanacsanahay aaladaha maaraynta hawl fudud, waana sida loo qaabeeyey Taskade. Waa maxay Taskade? Taskade waa barnaamij iskaashi oo waqtiga-dhabta ah oo loogu talagalay fikradahaaga, yoolalkaaga, iyo howlahaaga maalinlaha ah. Abaabul
Daraasad ka socota Microsoft oo ku saabsan Adeegsiga Bulshada iyo Aragtida laga qabo Qalabka Bulshada, waxay umuuqataa inay daah fureen cadeymo badan oo muujinaya in haweenku ka caqli badan yihiin ragga. Ragga ayaa uga badan dumarka inay dhahaan xanibaadahan waxaa sabab u ah walaac xaga amaanka ah, halka dumarkana ay u badan tahay inay eedeeyaan luminta wax soo saarkii. Ugh. Waa wax laga xumaado in, waqtigan oo dhan ka dib, wali waxaan ku haysannaa dad goobta shaqada naafo ka ah awooda
Email Desktop: Weli Waa Boqorka Wax Soo Saarka
Monday, August 16, 2010 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Gowraca Robby
Dhibaatada kaliya ayaa ah in emaylka ku saleysan websaydhku uu yahay mid aan fiicnayn. Haddii aad rabto inaad ka wax soo saar badan tahay nus bilyanka qof ee adeegsada emaylka ku saleysan websaydhka, si fudud ugu beddel macmiilka iimaylka desktop-ka. Waa tan sababta:
Saturday, May 29, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Gowraca Robby
Ilaa iyo intii ay jireen maamuleyaal mashruuc, waxaa jiray xeelad dhaqso-iyo-wasakh ah oo lagu sharraxayo mashruuc kasta. Waxaa loo yaqaan "Dhaqso-Raqiis-Fiican", waxayna kugu qaadan doontaa qiyaastii shan ilbidhiqsi inaad fahanto. Waa tan xeerka: Soonka, raqiiska ah ama wanaagsan: Dooro labo kasta. Ujeedada sharcigan ayaa ah inay na xusuusiso in dhammaan dadaalada murugsan ay u baahan yihiin isweydaarsi. Mar kasta oo aan faa'iido ku helno hal meel shaki la'aan shaki ayaa ka jiri doona meel kale. Marka
Sirta wax soo saarka: Tiknoolajiyaddu had iyo jeer ma aha farsamo
Jimco, Abriil 16, 2010 Sabtida, Juun 27, 2015 Gowraca Robby
Waa inaan qiraa, afarta xaraf ee TECH ayaa i siiya kuwa gariira. Ereyga "tiknoolajiyad" waa ficil ahaan eray cabsi gelin leh. Markasta oo aan maqalno, waxaa nalaga rabaa in aan cabsanno, cajabinno ama faraxno. Marar dhif ah ayaan diirada saareynaa ujeedka teknolojiyadda: ka bixitaanka waxyaalaha murugsan dariiqa si aan wax badan uga qabanno una baashaalno. Kaliya Teknolojiyada Macluumaadka In kasta oo ereyga teknolojiyad uu ka yimid erayga Griigga ah ee téchnē, oo macnaheedu yahay "farsamo," kuwan
Maxay kulamadu nuugaan? Talaabooyin noocee ah ayaad qaadi kartaa si aad shirarka uga midho dhaliso? Waxaan isku dayay inaan ka jawaabo dhammaan su'aalahaas ku saabsan soo bandhigiddan kaftanka ah (haddana runta ah) ee ku saabsan shirarka. Tani waa aragti la wanaajiyay oo ku saabsan bandhigga aan ku sameeyay shaqsi ahaan. Bandhigan ku saabsan Shirarka ayaa in muddo ah soo socday, waxaan wax ka qoray shirar iyo wax soo saar hore. Waxaan kaqeyb galay tan oo shirar ah, badankooduna waxay noqdeen qashin xun